Gabar aan qaangaar ahayn oo dib uga soo laabatay Suuriya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Gabar aan qaangaar ahayn oo dib uga soo laabatay Suuriya
La daabacay fredag 26 februari 2016 kl 15.00
Gabadar aan qaan gaar ahayn oo dhowaantan laga soo furtay ururka Daacish ayaa dib Sweden ugu soo laabatay.
sidaa waxaa xaqiijiyay Johan Tegel oo ka howl-gala laanta saxaafadda ee wasaaradda arrimmaha dibadda Sweden:
- Wasaaradda arrimmaha dibaddu waxay xaqiijineeysaa in muwaadin iswiidhish ah oo aan qaan-gaar ahayn ay dib ugu soo noqotay Sweden. Falkaasina oo ah mid lagu farxo.
Kuleeylihii sannadkii ina dhaafay ayay ahayd kolkii ey gabadha 15-jirka ahi u baxsatay dalka Suuriya iyada oo ey wada socdeen saygeeda. Gbadhaasi oo dabadeed la soo xiriirtay waalidkeed oo Sweden ku sugnaa una sheegtay in seygeedii uu ku biiray koox ka tir-san Al-qaacida, sidaa daraadeed eay dooneeysay inay Sweden dib ugu soo noqoto oo laga caawiyo. Wasaaradda arrimmaha dibadda iyo ciidanka nabad-sugidda oo howshaa lala socodsiiyay ayaanay suurtagal u noqon in gabadha gacan laga siiyo sidii ay dib Sweden ugu soo noqon lahayd ammaan-darrada Suuriya ka jirta aawadeed.
Halka ay bishii agoosto ee sannadkii ina dhaafay soo shaac-baxday in gabadha iyo seeygeedii uu ururka Daacish qafaashay una kaxeestay dalka Ciraaq, hase yeeshee toddobaadkii ina dhaafay ay soo shaac baxday in gabadhii la soo furtay iyadoona ay iminka wasaaradda arrimmaha dibaddu xaqiijisay inay Sweden dib ugu soo laabatay. Johan Tegel ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo sidii wax u dhaceen:
- Falkaasi wuxuu u dhacay wada-shaqeeyn hadday noqon lahayd Sweden iyo mid caalami ahba. Iminka hoowshii gabadha la xiriirtay ayaa ka dhammaatay wasaaradda arrimmaha dibadda, mana dhici doonto inaan war-bixinno kale ka bixinno, sida uu hadalka u dhigay, sarkaalka u hadlayay wasaaradda arrimmaha dibadda, laanteeda saxaafadu.
Gabar 16 jir ah oo la soo furtay koox ciraaq ku haysatay